LG Racks Up 31 Red Dot Design Design Awards
Amatakwara Ọzọ maka Ọkachamara Nmepụta Ngwa site na Ndị Ọkachasị Mmepụta
A nabatala LG Electronics (LG) ọzọ maka ike ya na ndị na-azụ ahịa na ụlọ ọrụ mmepụta ihe, na-enweta ọmarịcha ngwaahịa 31 na-enye otuto na afọ a Red Dot Design Awards, otu n'ime ugwu kacha elu na-asọpụrụ.
Ewebata na CES 2021, e mere ka ndị nrụpụta ngwa ọrụ LG jiri onyinye 5 sọpụrụ nke gụnyere InstaView Door-in-Door friji, ngwa nju oyi na Freezer, Mkpịsị mkpịsị mkpịsị CordZero, ihe ndozi ikuku na Styler.
Otu n'ime ihe kachasị baa uru bụ nsọpụrụ enyere LG ngwa mmebe ngwa na akụrụngwa maka akụrụngwa na agba (CMF).
Emere ya dị ka egwu nke ngwa ngwa, ndị na-emepụta ngwa ngwa LG bụ ngwakọta nke ngwa ngwa teknụzụ nke teknụzụ nwere nnukwu ihe enwere ike ịhazi ya iji mezuo nkọwa nke onye ahịa ọ bụla.
A na-eji ihe ndị dị ka igwe anaghị agba nchara, iko, ọla na FENIX - ihe ọhụụ na teknụzụ mkpuchi mkpuchi dị elu nke Arpa Industriale mepụtara - iji mee ka mmezi nke ngwaahịa ọ bụla dị na nchịkọta ahụ pụta ìhè.
Hosọpụrụ ndị ọzọ gụnyere mmata maka LG WashTower, otu ngwongwo, ihe mkpuchi ịsa akwa veti nke na-eme ka ohere dịkwuo ala karịa ka ị na-ejikwa nnukwu ibu buru ibu, maka imepụta pụrụ iche.
E wezụga ngwa ụlọ, ọtụtụ ngwaahịa kọmputa kọmputa LG dị ka UltraGear Gaming Monitor na LG gram jara mma maka atụmatụ ha dị elu, nke mara mma nke gosipụtara ụkpụrụ omume ngwaahịa ahụ.
Uhie Red Dot Design bụ otu n'ime asọmpi asọmpi ọkachamara kachasị ewu ewu n'ụwa na akara ngosi pụrụ iche abụrụla nke mba dị iche iche dịka otu n'ime akara akachasị achọ achọ nke kachasị mma.
N'afọ a ụfọdụ ngwaahịa 7,800 ka edoro maka echiche ndị juri.
"Dị ka a ika na-agbalịsi ike ịnapụta àgwà ngwaahịa na ahụkebe imewe, ọ bụ mgbe niile a nsọpụrụ na-enweta ude site Red ntụpọ," Lee Chul-bae, onye isi ụlọ ọrụ LG Electronics 'Corporate Design Management Center.
"LG na-ewepụtara iji zute ndị na-azụ ahịa 'ọchịchọ ịkwalite ogo nke oghere na ngwaahịa ndị dị elu nke dịkwa mma nke ọma ma anyị ga-aga n'ihu na-agbaso atụmatụ ndị na-agbanwe agbanwe na-eweta ihe ndị a na-atụ anya ya."